18 Dec 2013 Ihe site Lyndon Reys 13 Comments
Ndi Kratom Nwere ọ bụla Ize Ndụ nke Imeju toxicity?
19 Nov 2013 Ihe site Lyndon Reys 6 Comments
Ọtụtụ Fans nke ọzọ herbal usọbọ Kratom ijuanya, ka nke a na-emere osisi okobụp ọ bụla ize ndụ nke imeju toxicity? Ọ dịghị onye chọrọ n'amaghị ama imebi ha dị oké mkpa akụkụ, especially as a result of taking...
Gịnị bụ mmetụta bara uru nke Kratom Azuokokoosisi & Vein?
13 Nov 2013 Ihe site Lyndon Reys 11 Comments
N'oge gara aga chere na nke naanị dị ka n'efu, kratom stem & vein is now being viewed by some as a viable source of health benefits. Anyị eco-adịghị ụwa nke oge a, we are perpetually looking for ways to waste...
Iji Kratom-akpaso Drug Addiction & Detox Mgbaàmà
13 Nov 2013 Ihe site Lyndon Reys 7 Comments
Ị na-atụle site na iji kratom aka gafere a ọgwụ iri ahụ? Ọ bụrụ otú ahụ, matakwuo na na otú ihe mere ndị mmadụ na-agbalị a revolutionary tiori tupu ị na-etinye ya ná ndụ gị. The leaves of the Mitragyna...
Olee otú Iji Zere A Kratom mmanya na-egbu
13 Nov 2013 Ihe site Lyndon Reys 6 Comments
Ezie na a ezi kratom mmanya na-egbu bụ obere, e nwere ụfọdụ ndị isi ihe ndị ị pụrụ iji echebe onwe gị tupu ọ bụla na-achọghị mmetụta. Many people assume that hangovers are inevitable any time a stimulant...
Iji Kratom ka a stimulant N'ihi Energy, Focus na vitality
Iji Kratom mbo mbuli ike na ọkwa bụ a na-eme nke ahụ nwere ike ịdị ọtụtụ puku afọ. Na lush ebe okpomọkụ na oke ohia nke Southeast Asia ebe Mitragyna Speciosa Osisi na-eto indigenously, native peoples...
Ọ Kratom akpata arọ Loss?
13 Nov 2013 Ihe site Lyndon Reys 13 Comments
Nwere ike ị na-eji Kratom maka ibu ọnwụ? Na fad diets cropping elu ụbọchị ọ bụla, ọ pụrụ ịbụ ihe siri ike ikewapụ eziokwu si akụkọ ifo. A quick search on most health and fitness philosophies results in strong arguments...
Kratom Capsule Mmetụta & Dosages
Akụkụ site n'akụkụ, olee otú kratom capsules iji tụnyere ụdị ndị ọzọ nke oge ochie a osisi usọbọ? Ezie na ntụ ntụ ẹdude n'ime capsules bụ yiri rụrụ powders eresị ndị ounce, the unique format of pills...
Iji Kratom maka Ụra, Ehighị ụra nke ọma na ogwuura mmetụta
13 Nov 2013 Ihe site Lyndon Reys 3 Comments
12 Nov 2013 Ihe site Lyndon Reys 2 Comments